Taliska ciidamada booliska Soomaaliya oo war kasoo saaray dagaalkii Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Taliska ciidamada booliska Soomaaliya oo war kasoo saaray dagaalkii Muqdisho
Taliska ciidamada booliska Soomaaliya oo war kasoo saaray dagaalkii Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska booliska Soomaaliya oo ka hadlay dagaalkii xalay ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in askar loo xiray isku dhacii degmada Hodan ku dhex maray ciidamo ka kala tirsanaa booliska militeriga Soomaaliya.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isku dhacaas uu ka dhashay ciidamo si qaldan u weeraray ciidamo ku sugan bar koontorool oo lagu ogaa, balse si gaar ah uma uusan carabaabin ciidamada wax weeraray kuwa ay yihiin.
“Dhacdadaas waxay aheyd ciidan lagu ogaa bar koontorool iyo ciidan kale oo ka soo baxay xeradii lagu ogaa, ayaa si qaldan oo si faham darro ah iskugu dhacay meeshaasna waxaa ka dhalatay tacshiirad sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh,” ayuu yiri Afhayeen Booliska Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa sheegay in isaga oo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu raali galin buuxda kasii nayo shaqaaqadii xalay qoysaskii lagu dul dagaalamay.
“Waxaan rabaa in aan umada Soomaaliyeed gaarsiiyo, ugana tacsiyeeyo dadkii wax ku noqday tacshiiradii xalay, in aan raali gelin dul dhigo dadkii ka agdhawaa soonka uu xalay dagaalkaas ka dhacay, in aysan aheyn wax munaasab ah, kuna habooneyn dhegaha umadda Soomaaliyeed ay gaaraan xilligan.
“Waxaana umadda u balan qaadeynaa, in askartii ku lug laheyd tacshiiradaas la hor keeni doono cadaaladda, sida ay qabto shuruucda dalka, waxaan digniin u direynaa ciidamada ka wada tirsan dowladda in aan la aqbali doonin isku dhac dambe oo ciidan, cidii dambe oo ku lug yeelatana sharciga ayaan waafaji doonaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Sidoo kale waxa uu sheegay inay balan qaadayaan in isku dhacyada ciidamada dowladda ku dhex mara magaalada Muqdisho ay wax weyn ka qaban doonaan, isla markaana ay ku dadaalayaan in mar dambe aysan soo laaban tii xalay oo kale.
Dagalkii xalay dhex maray labada ciidan waxaa ku dhintay askar iyo sarkaal lagu magacaabi jiray Daahir Sheekh Axmed, oo ka tirsanaa Saraakiisha ciidanka xoogga dalka, Qaybta 21aad, waxaana la sheegay in uu kamid ahaa saraakiil goobtaas u tagtay inay kala dhex galaan labadii ciidan ee tirirtu u dhaxeysay.